क्रान्तिको हावा सधैं एकै दिशामा बहँदैन-भट्टराई::Online News Portal from State No. 4
क्रान्तिको हावा सधैं एकै दिशामा बहँदैन-भट्टराई
काठमाडौं, २५ पुस – नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प संविधान संशोधन नै भएकोमा जोड दिएका छन्। सोमबार काठमाडौंमा नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघले संविधान संशोधनको आवश्यकता विषयमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले अहिले संविधान पुर्नलेखनको कुरा गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताउँदै अगाडि भने, ‘तागत हुन्थ्यो भने त अहिलेको संविधानलाई पुरै उल्ट्याएर पुर्नलेखन गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो स्थिति अहिले छैन। क्रान्ति र परिवर्तनको हावा सधैं एकैदिशातर्फ बहँदैन, त्यसैले तत्काल आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर संविधान पुर्नलेखनको संभावना छैन’।
अहिलेको संविधानमा संघीयता र राज्यको पुनःसंरचनाको विषय नै मुख्य भएको र यो विषय नेपालका नितान्त आन्तरिक मामिला भएकोले यसलाई अनावश्यक ढंगले बाह्य हस्तक्षेप भनेर पन्छिन नहुनेमा उनको जोड थियो। ‘पुनःसंरचना नितान्त हाम्रो आन्तरिक विषय हो। यसर्थ, मुख्यगरी तीन क्लस्टर हाम्रो आफ्नै हो’ उनले जोड दिए–‘ती क्लस्टरहरुको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । यो कुनै विदेशीले बनाइदिएको कुरा होइन। यो हाम्रो आफ्नै उपज हो’।